Fatrao ny fahombiazan'ny HDD anao amin'ny Linux amin'ny hdparm | Avy amin'ny Linux
Imbetsaka isika no mahatsikaritra fa ny fahombiazan'ny mpizara dia tsy araka ny tokony ho izy, eo no anontanianay, aiza ny olana? … Ho feno bandwidth ve izany? … Tsy fahampian'ny CPU na RAM? … Sa tsy ny fanoratana sy famakiana amin'ny HDD no ho tsara indrindra?
Eto aho hasehoko anao ny fomba hahalala izay hafainganana farany ambony manohana ny HDD anao, ny hafainganam-pandeha mety hiasa ao aminy sns, hampiasa ilay fitaovana izahay: hdparm
1 Mametraha hdparm
2 Mampiasa hdparm
Voalohany ary zavatra miharihary izany, tsy maintsy mametraka ny rindrambaiko izay hampiasaintsika isika. Raha mampiasa Ubuntu na Debian ianao dia azonao apetraka amin'ny:
Raha mampiasa ArchLinux na distro hafa miorina amin'ity ianao dia:
Ny voalohany dia fantaro ny hafainganam-pandeha farany ambony ny HDD anay, izany hoe, raha Sata1, Sata2 na 3, ohatrinona no anohanany. Ho an'ity dia hampiasa ity baiko manaraka ity izahay:
Ity raha raisina an-tsaina fa ny HDD tianay hojerena dia / dev / sda, izany hoe ny voalohany na ny lehibe.
Hiseho amintsika toy izao ny zavatra:
* Haingam-pandeha fanaovan-tsonia Gen1 (1.5Gb / s) * Hafainganan'ny fanaovan-tsonia Gen2 (3.0Gb / s) * Hafainganan'ny famantarana Gen3 (6.0Gb / s)
Miankina amin'ny fahaizany ny HDD, ary mazava ho azy, raha manana ny hafainganam-pandeha tohana faran'izay betsaka ao amin'ny BIOS izy ireo.
Andao izao jereo ny hafainganana ankehitriny miasa ny HDD:
Avereno in-droa na intelo ny baiko mba hahazoana sanda isan-karazany.
/ dev / sda: Famakiana fotoana cache: 22770 MB ao anatin'ny 2.00 segondra = 11397.43 MB / seg Famakiana kapila buffer: 432 MB ao anatin'ny 3.01 segondra = 143.59 MB / seg
Ny sanda voalohany dia misy ifandraisany amin'ny hafainganan'ny cache cache, ny sanda faharoa dia midika hoe ny hafainganana mamaky sy manoratra tena izy, ny an'ny kapila ara-batana toa izany.
Manantena aho fa nanampy be ianao.
Amin'ny lafiny iray, afaka mahita fampahalalana feno sy amin'ny an-tsipiriany momba ny HDD ianao amin'ny fanesorana ny grep ny baiko napetrako teo aloha, dia izao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Fandrefesana ny zava-bitanao HDD amin'ny Linux amin'ny hdparm
Ha, tsy haiko ny antony fa novakiako ny "Hatsarao ny fanatanterahana" fa tsy ny "refesina" ary handeha hitsambikina aho ary hanontany ny fika nampiasanao. Misaotra Gaara.
HAHAHAHA tsara ... ny hafetsifetsena miharihary indrindra dia ny mahazo SSD hehe, fa io no lafo indrindra 😀
Fotoana vitsy lasa izay dia nanana kapila 3 tao amin'ny birao birao iray aho ary hitako fa ny tanjon'ny RAID tany am-boalohany dia ny hafainganana ary nanao RAID 0 (fanendahana) aho, saika ny avo telo heny no nanaovako ny hafainganana fa ny fatiantoka kosa raha very kapila aho dia ho very. ny zava-drehetra.
Raha ny fanazavana, talohan'ny RAID dia "Redundant Array of Inexpensive Disks" dia "Independent Disks" izy ity satria tsy mila hafainganana be loatra isika amin'ny ankapobeny fa azo itokisana.
Ny zavatra nitovizany tamiko no nitranga!
antitra dia hoy izy:
Miaraka amin'ny kapila IDE (PATA) zavatra taloha, ny hafainganana farany ambony lazainao dia mivoaka miaraka amin'ny -tsy mivoaka ho ahy. Etsy ankilany, mivoaka ireo ankehitriny, izay hanome anao hevitra:
Ny fotoana voafetra dia mamaky: 334 MB ao anatin'ny 2.01 segondra = 166.40 MB / seg
Mamaky toy izao ny kapila buffered buffer: 148 MB ao anatin'ny 3.03 segondra = 48.77 MB / seg
Misaotra tamin'ny hevitra 😀
Ho an'ny fitsapana bebe kokoa dia manoro hevitra ny phoronix aho
Tsy hilalao mafy amin'ny fitsapana puck ao an-trano aho. Raha tsy misy fanazavana ara-tsiansa sy matematika dia arakaraky ny hampijanonanao azy amin'ny fihodinana (hamono azy) no hahalalanao tsara kokoa. Azonao atao ny manimba azy amin'ny alàlan'ny fanimbana azy, mametaka azy, manafina azy sns, imbetsaka. Tsy mampidi-doza ireo fitaovana fanamarinana kapila, arakaraky ny fampiasanao azy ireo no hampiasanao ny kapila. Toy ny SSDs sy ny kapila USB, dia vitsy ny mpanoratra ananan'izy ireo. Ny fampiasana azy ireo indraindray dia tsara, nefa tsy mihoa-pefy.
Ary arakaraka ny tsy ijanonanao / fanombohana ny kapila no tsaratsara kokoa.
Araraoty araka izay tratra ny kapila.